Hruboskalské dombo reguta irowo inzvimbo inokosha inotarisa nzvimbo. Pakati pezvivako zvakakurumbira ndeye Hrubá skála castle, yakavakirwa padombo guru mumutambo we14. yezana remakore uye Wallenstein Castle. Panguva bedrock inovakwa zhinji nzvimbo dzinoyevedza dzakadai Marian tarisiro, tarisiro chehondo, panguva netarisiro shumba uye mumwe uko vashanyi vanogona kuchengeta hunoshamisa dombo idzodzo uye kakawanda makomo zdolávající shongwe dzakapoteredza. Kutenda kune zvitubu zveHruboskalska vakapfuma mu calcium ions, spa yeSedmihorky yakasikwa pano.
Iyo Hruboskalsko Nature Reserve iri muLiberec Region, 3 km kubva kuTurnov. Iri pakati pemisha yeSedmihorky, Hrubá Skála neKacanovy. Kukwirira apa kuri pakati pemamakumi maviri neshanu kusvika makumi maviri neshanu kusvika makumi maviri emakore .. Hruboskalsko dhorobha idhorobha rinonyanya kukosha retaundi muBohemian Paradise Yakachengetedzwa Landscape Area.
Kuumbwa kwemataundi emadombo kwakakamurwa kuita zvikamu zvina. Yekutanga chikamu chekugadzirira umo muviri wejecha uri pazasi pevhu. Nekuda kwekuita kwemvura yepasi, masalt sandores cores anoumbwa anotenderedza sofa nyoro. Panguva ino simba rinosunda remazaya echando panguva iyo makunguzi-anoyerera emvura anotonhora. Chikamu chinotevera chikamu chekutanga, icho chinoratidzwa ne tectonic kusimudza uye kugaya basa. Mhedzisiro yacho igirazi rezvekurima reCentral Bohemia ine sandstone gorges. Chikamu chechitatu chikamu chakakura, chinoitika mushure mekupera kwekuora kwe tectonic. Muchikamu chino, mhando dzakasiyana dzemamiriro ekunze, dziviriro yemasvosve uye kutsemuka kwezvikamu zvinoitika, zvinotevera kumawere edombo remadziro uye zvinogona kuve nehupamhi hunosvika 1 m. Kuparadza kunowanzo kukonzerwa nekufamba kwekufamba, matombo anovharira nematombo emabwe. Iro dombo rinogona kuonekwa semufananidzo we maficha emazera akasiyana. Iri dombo guta, sevamwe vari mudunhu, rave richikukura kwemamiriyoni 18-20 emakore.
Iyo Hruboskalsko Nature Reserve yakaziviswa neChirevo cheBohemian Paradise PLA Administration yemusi wa 21 Kurume 1998 ine simba kubva 22 Kubvumbi 1998.
Hruboskalská vrchovina ndeyeVyskeřská vrchovina, iyo ndeyeGomo reVerovská. Zvose izvi chikamu cheSeveročeská tabula. Hruboskalská vrchovina ibark tectonic, iyo yakasungwa neRibyan kuputsa uye kuputika muJorodhani Mupata uye Rwizi rwe Žehrovka. Nheyo dzeguta redombo dzakasimuka mune zviduku zvishoma, nepo microforms yeuchi, rock ledges, matanda uye mahwindo zvakasikwa panguva yekufamba. Massifs anonyanya kuuraya ndiyo Lighthouse, boka reKapelník uye Dragon Rocks. Tinogona kuonawo mahavha, masango ematombo uye tunnel. Hruboskalské dombo reguta rakaumbwa neine simba rinonzi lithicated quartz sandstone. Simba re sandstone ndeye 120 uye mamwe mahedheni ari kunze kusvika 60 m.
Munenge mutaundi rose dombo rakafukidzwa nemasango (97%). Chimiro chemienzaniso inonzi relics ye birch, iyo yakachengetedzwa inoparadzirwa chete, zvikurukuru pamapuranga ematombo kana padombo massifs. Iwe unogonawo kuwana pine oak mapuranga, asi ane oak pasi. Chimwe chimiro chekuwedzera kweguta redombo ndiyo acidic beechwood, iyo inosanganisira mvura yemvura pakati pematombo.
Hunhu hwemhando yepasi peuswa hwemakwenzi ari kunyanya kusviba (Vaccinium myrtillus), heather (Calluna vulgaris), cranberry (Rhodococcum vitis-idaea), mutsvairo (Avenella flexuosa), firefire yakajairika (Aquilegia vulgaris) uye hairy Woodrush (Luzola pilosa) . Mune rakanyorova gorges tinogona kuwana Austrian fern (Dryopteris cart pamusoro) uye yakajairika fern (Dryopteris dilatata). Kuitika kwes sedges (Carex) uye tsanga (Phragmites australis) zvakajairwawo, kunyanya kutenderedza madondo madondo emusango. Iyo yakajairika mabhiza (Equisetum telmateia) yakajairika mumipata yematsime echitubu. Mhando inonyanya kunetseka zvisingaiti ndeyePinus strobus, iyo inogona kuisa panjodzi nharaunda dzemiti yemichero mapaipi. Dzimwe mhando dzinokurumidza kukura senge oak tsvuku (Quercus rubra), European larch (Larix decidua) uye hombe fir (Abies grandis) zvakare yakadyarwa pano.
Hruboskalsko Nature Reserve ndiyo nzvimbo yakashanyira. Mukuwedzera kune kukwira, kufamba uye mabhasikoro zvakajairika. Vashanyi havagoni kungonakidzwa nemaonero anoyevedza ematombo anokosha, asiwo maitiro akasiyana. Kune marwendo akawanda akacherechedzwa kune vatashanyi uye mabhasikoro. Pakati pezvimwe zvinonakidza nzvimbo dzinofarira ndeye Marian Lookout pedyo neHrubá skála, apo imwe yemafungiro akanaka kwazvo eParadhiso yeBohemian pa Dragon Rocks naTrosky. Pasi peHrubá skála castle kune mvura yakadzika ine mheto makumi matanhatu nemashanu yakareba dombo inonzi "Mouse Hole". Pakati pezvinhu zvinonakidza zvigadzirwa zvemasango ndezveArboretum yeBukovina uye dombo re Čertova ruka. Heino nzvimbo yekuchera matongo uye zvakasara zveimba yekare. Zviitiko zvinokosha zvemitambo yeHruboskalska dzinosanganisira Valdštein Castle, Hrubá skála Chateau, chivako chemaitiro evanhu Kopitce's Farm uye Sedmihorka Spa. Nekushanyira kwemazuva akawanda munzvimbo iyi, zvinobvira kushandisa mikana yakasiyana yekugara, munzvimbo dzekugara dzekugara kana mune imwe nzvimbo inofadza Camp Sedmihorky.
Czech Paradise kwasharara Rock Hruboskalsko
Tags: Czech Paradise kwasharara Rock Hruboskalsko
Nzvimbo: Hruboskalsko, 511 01, Czech Republic